03 | July | 2007 | Layma's World
Posted on July 3, 2007 by layma
မြန်မာအမျိုးသမီးများနေ့ ….ဇူလိုင်လ (၃) ရက်…..ဟူသော အပြာရောင် ဆိုင်းဘုတ် အကြီးကြီးကို ရန်ကုန်မြို့ ရဲ့ အချို့ သောနေရာများမှာ တွေ့ နေရတာ တပတ်လောက် ရှိသွားပါပြီ ။ ဒီနေ့ တော့ အဲဒီနေ့ ကို တကယ်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ…….။ International Women’s Day ကတော့ မတ်လ ၈ ရက် …….။ မြန်မာကတော့ ဇူလိုင် ၃ ရက်တဲ့……။ ဘယ်နေ့ ဖြစ်ဖြစ်ပါ….. ခုလို သတ်သတ်မှတ်မှတ် ရှိလာတယ်ဆိုတာကိုက အမျိုးသမီးတွေ နေရာရ….. အရေးပါလာတဲ့ သဘောရှိပါတယ်……..။ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေက အခုမှ အရေးပါ အရာရောက် လာတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး……။ နေရာတကာ အရေးပါ အရာရောက်ခဲ့တာ ကြာ….လှပါပြီ…….။ ဦးပုညက ဆဒ္ဒန်ဆင်မင်း ဇာတ်ထဲမှာ “ သူ့ မယားငိုခဲ့လျှင်….. ဟိုလူကြီးက ပျာယီးပျာယာ…..ဘဇာအရေး မတွေးမမြော် ….” လို့သရော်ခဲ့တာကိုကြည့်ရင် မိန်းမတွေ ဘယ်လောက်အရေးပါလဲ သဘောပေါက်……။ သီပေါမင်းရဲ့ အိမ်သူသက်ထား စုဖုရားရဲ့ အရေးပါ အရာရောက်လိုက်ပုံများကတော့ ရာဇ၀င်မှာ စာတွင်ရစ်ပါပေတယ်…….။ အမျိုးသမီး စွမ်းဆောင်ရှင် စုဖုရားရဲ့ ကြီးမားလှတဲ့ ကျေးဇူး က …….မောင်ပျော်မြူးတဲ့ ဆောင်တော်ကူးတဲ့…..အလေ့အထကို ပယ်ဖျက်နိုင်ခဲ့တာပါဘဲ…….( နန်းမတော်မယ်နု…၊ ဆင်ဖြူမရှင်….စတဲ့ သြဇာ ကြီးမား မိန်းမသားတွေလည်း ရှိခဲ့…..ရှိဆဲ…..ရှိလတ္တံ့ပါဘဲ )။ အခုခေတ်မှာလည်း မိခင်နှင့်ကလေး ၊ အမျိုးသမီးရေးရာ ၊ အမျိုးသမီး စွမ်းဆောင်ရှင်များ စတဲ့အသင်းကြီးတွေက အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အရေး…ပြဿနာ… အ၀၀ကို တာဝန်ယူဖြေရှင်း စောင့်ရှောက်ပေးနေတယ်လို့ပြောပါတယ်…….။ ၀မ်းမြောက်စရာ ကောင်းပါတယ်……။ ကြုံတုန်းကျောင်းတုန်းက အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုကို မျှဝေချင်ပါသည်……။ “လေးမ” တို့ဗိသုကာကျောင်းသား တွေက နောက်ဆုံးနှစ်မှာ
“ မင်း……ရုံးချုပ်က ဘာတွေလုပ်မှာလဲ……” လို့ မေးပါတယ်……။ ကျောင်းသူက တော်တော်နှင့် မဖြေ…….။ စိတ်မရှည်တော့တဲ့ ဆရာက အခုလိုပြောခဲ့ပါတယ်…….
Filed under: Seasonal Post |	3 Comments »